दुईपांग्रेमा ८० प्रतिशत कर : कुन मोटरसाइकलको वार्षिक कर अब कति ? – Himalaya TV
Home » अर्थबजार » दुईपांग्रेमा ८० प्रतिशत कर : कुन मोटरसाइकलको वार्षिक कर अब कति ?
दुईपांग्रेमा ८० प्रतिशत कर : कुन मोटरसाइकलको वार्षिक कर अब कति ?
१६ जेष्ठ २०७४, मंगलवार ०७:२६
काठमाण्डौ १६ जेठ । दुई पांग्रे सवारीमा भन्सार, अन्तः शुल्क भ्याटलगायत गरी करिब ८० प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । सरकारले चालु आवको बजेटमा सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार दस्तुर र सवारी साधनको वार्षिक कर वृद्धि गरेको छ ।
दुई पांग्रे सवारीमा केही वर्षदेखि नबढाइएको वार्षिक कर प्रणाली आर्थिक वर्ष २०७३ / ७४ मा बढाइएको थियो । २५० सिसि सम्मको मोटरसाइकलको पहिलेकै वार्षिक कर कायम गरिएको थियो भने २५१ सिसिदेखि माथिका सबै मोटरसाइकलको वार्षिक कर वृद्धि गरिएको थियो।
त्यसैगरी अटो रिक्सा, थ्री व्हीलर र टेम्पोको वार्षिक कर पनि वृद्धि गरिएको छ । विद्युतीय दुई पांग्रे सवारी साधनलाई पनि करको दायरामा ल्याइएको छ । १५ सय वाट क्षमताको दुई पांग्रे सवारी साधनको कर ११ हजार तोकिएको छ।
त्यस्तै १५०१ देखि माथिका दुई पांग्रे सवारी साधनलाई १२ हजार कर लाग्ने व्यवस्था चालु आवको बजेटले गरेको छ । तर यी सवारी साधानमा सरकारले वार्षिक ५० प्रतिशत छुट दिने नीतिका कारण वार्षिक रूपमा क्रमशः ५ / ६ हजार मात्र कर लाग्दै आएकोछ ।
कुन मोटरसाइकलको सडक कर कति पुग्यो ?
१२५ सिसिसम्मको मोटरसाइकल सडक कर : १० हजार
१२६ देखि २५० सिसिसम्मकाे माेटरसाइकलकाे सडक कर :१२ हजार
२५१देखि ४०० सिसिसम्म माेटरसाइकलकाे सडक कर : १५ हजार
४०१देखि माथि सिसि भएका माेटरसाइकलकाे सडक कर : २० हजार
कुन मोटरसाइकलको वार्षिक कर कति पुग्योर ?
१२५सिसि सम्मका माेटरसाइकलकाे वार्षिक कर : २५ सय
१२६ देखि २५० सम्म सिसि भएका माेटरसाइकलकाे वार्षिक कर : ४ हजार
२५१देखि ४०० सम्म सिसि भएका माेटरसाइकलकाे वार्षिक कर : ८ हजार
४०१देखि माथि सिसि भएका माेटरसाइकलकाे वार्षिक कर : १५ हजार
याे खबर कारोबार दैनिकमा छ ।